I-Bitcoin, yintoni, isebenza njani kwaye ungathenga phi i-Bitcoins | Iindaba zeGajethi
Siva malunga neBitcoins iminyaka eliqela, hayi kwiindaba kuphela, kodwa nakwimidlalo kamabonwakude. Ingxaki kukuba kumaxesha amaninzi, ngakumbi kuthotho lweTV, Yintoni eyiBitcoins kwaye sinokwenza ntoni ngayo iphosakele. Bitcoin yimali ebonakalayo Ayilawulwa nguwo nawuphi na umzimba ogunyazisiweyo, ayigcinwanga kwiibhanki, ayilandeleleki kwaye kumaxesha amaninzi, ngakumbi kwiintsuku zayo zokuqala, inxulunyaniswa nezinto ezingekho mthethweni ezinxulumene nokuthengisa iziyobisi kunye nezixhobo (Indlela yeSilika iya kuvakala eziqhelekileyo kuthi sonke). Kodwa ukuba simbe nzulu kancinane ukuba yintoni eyona ngqekembe intsha, sinokubona ukuba inokuba, kwikamva elikude kakhulu, ingqekembe esetyenziswa kakhulu ngabasebenzisi.
Ukongeza, iBitcoin ihlupheke ngokunyuka okumangalisayo kwixabiso layo, yiyo loo nto iye yaba lithuba elihle lotyalo-mali kwabo bafuna ukufumana imbuyekezo ebalulekileyo kwimali yabo. € 5.000, € 10.000, € 200.000,… kukho iingcali kwicandelo eliqikelela ikamva apho I-Bitcoin inokuxabisa i-euro ezizigidi. Ukujongana nala mabango, abantu abaninzi bangena kwimarike yeBitcoin njengabatyali mali.
Ufuna utyalomali kwiBitcoin? Sikunika i-10 $ SIMAHLA kwiBitcoin ngokunqakraza apha
1 Yintoni iBitcoin?
2 Ngubani odale i-Bitcoin?
3 Ibaluleke malini iBitcoin?
4 Ndingazithenga phi iBitcoins?
5 Uyenza njani eyam iBitcoins
6 Ngubani olawula iBitcoins?
7 Izibonelelo zeBitcoins
8 Ukungancedi kweBitcoins
Njengoko benditshilo ngasentla, I-Bitcoin yimali yedijithali, ayinamanqaku okanye iimali zemali zokwenza intengiselwano. I-Bitcoins zigcinwa kwizipaji ezibonakalayo apho sinokuthi senze iintlawulo kwangoko kwi-intanethi. Ukushiya bucala ukusetyenziswa kwesiqhelo enxibelelene nako, okwangoku iMicrosoft, iqonga lokudlala leStam, iikhasino zaseLas Vegas kunye namaqela ebhola yomnyazi eNBA ayayamkela le mali yedijithali njengendlela yokuhlawula, kodwa ayisiyiyo yodwa ukusukela inani lamashishini kwaye iinkampani ezinkulu eziqala ukuthanda ukusetyenziswa kwale mali ziyanda.
Fumana i- $ 10 SIMAHLA kwi-Bitcoin ngokunqakraza apha
Ngamafutshane singatsho njalo I-Bitcoin yidigital epheleleyo, eyabelweyo kwaye iqhutywa ngumsebenzisi. Ngenxa yokunqongophala kolwazi malunga nale mali intsha engalawulwa nguwo nawuphi na umbutho wezezimali, amanye amazwe sele eqalile ukuvimba iiwebhusayithi ezivumela ukusebenza ngale mali, njengeRussia, iVietnam, neIndonesia. Nangona kunjalo, amanye amazwe afana ne-United States kunye neBrazil sele enikezela ngee-ATM apho sinokuthenga i-Bitcoins ngokuthe ngqo ngokuzidibanisa nesipaji sethu.
Kukho ezinye i-cryptocurrencies ezifana ne-Ether, Litecoin kunye neRipple kodwa inyani kukuba iBitcoin namhlanje kukuphela kwemali yedijithali ngokubaluleka kunye nobunzima kwihlabathi liphela.
Ngubani odale i-Bitcoin?
Nangona kungekho bungqina bokwenyani bokuba ngubani umdali wayo, Uninzi lweengoma zekhredithi uSatoshi Nakamoto Ngo-2009, nangona iimbono zokuqala zokwenza imali ezisasazwayo nezingachazwanga zafunyanwa ngo-1998, kuluhlu lweposi olwenziwe ngu-Wei Dai. USatishi wenza iimvavanyo zokuqala zokusebenza kwengcinga yeBitcoin kuluhlu lokuposa kwiyunivesithi yakhe, nangona kwakamsinya emva kokuba eshiye iprojekthi, eshiya ulwandle lwamathandabuzo kwaye ebangela ukungabikho kokuqonda malunga nomthombo ovulekileyo osekwe kuwo iBitcoin kunye noluncedo lokwenyani.
Ngo-2016, wase-Australia UCraig Wright, ubanga ukuba ungumyili wemali edijithali ecaleni kukaDave Kleiman (usweleke ngo-2013) esithi igama likaSatoshi Nakamoto lalibubuxoki kwaye lenziwe bobabini ukuba bazifihle ngokungaziwa. UCraig wazisa uthotho lwezitshixo zabucala ezinxulunyaniswa neengqekembe zokuqala ezenziwe nguNakamoto, kodwa kuyabonakala ukuba ulwazi alutyhilileyo ukubonisa ukuba ungumdali alonelanga kwaye okwangoku igama lomdali weBitcoins lisesemoyeni .
Ibaluleke malini iBitcoin?
Kunyaka ophelileyo, ixabiso leBitcoin linyuke nge-500%, kwaye ngexesha lokubhalwa kweli nqaku, ixabiso leBitcoin likwi- $ 2.300. Ngaphandle kokunyuka kwemali ekhoyo kule minyaka idlulileyo, abaninzi basathandabuza xa befaka imali kule mali yedijithali, siyikhathalele njengempembelelo yeqamza eza kuthi kungekudala iqhume, ithathe imali yabo bonke abasebenzisi abatyala ixesha nemali kule mali.
Ngaba uyafuna ukutyala imali kwiBitcoin?
Cofa apha ukuze uthenge iBitcoin
Inqaku elinye ngakulo kukuba ayixhomekekanga kuwo nawuphi na umzimba oyilawulayo kwaye onokuyilawula, Kungokuba ngabasebenzisi kuphela kunye nabasebenzi mgodini, kunye nenani lezinto ezenziwa mihla le, ezinokuthi zibe nefuthe ekunyukeni nasekuweni kwexabiso labo. Izicelo ezahlukeneyo okanye iphepha lewebhu elisivumela ukuba sithenge kwaye sithengise i-Bitcoins zisinika isicatshulwa ngexesha elifanelekileyo esifuna ukuqhubekeka ngalo ukuze sazi ngalo lonke ixesha inani leBitcoins esiza kuzifumana. Ukuba ufuna ukuthenga iBitcoins, Ingcebiso yethu kukuba usebenzise iqonga elomeleleyo nelikhuselekileyo njengeCoinbase. Cofa apha Ukuvula iakhawunti ngeCoinbase kwaye uthenge iBitcoins yakho yokuqala.
Ndingazithenga phi iBitcoins?
Nangona ixabiso leBitcoins lingahluka kakhulu ngaphezulu konyaka, ngakumbi nangakumbi abasebenzisi abanomdla kutyalo-mali kule mali yedatha. Okwangoku kwi-intanethi sinokufumana inani elikhulu lamaphepha ewebhu asivumela ukuba sityale imali kwiBitcoins. Kodwa phakathi kwazo zonke esinokuthi sizifumane, uninzi lwazo lufuna ukugcina imali yethu ngaphandle kokunikezela ngento, siyaqaqambisa iCoinbase, enye yeyokuqala ukubheja kule mali ingekho embindini kwaye engaziwayo phantse kwasekuqaleni.
Ukuze ukwazi thenga iBitcoins ngeCoinbase ku funeka khuphela usetyenziso olufanelekileyo lwenkqubo nganye yokusebenza: i-iOS okanye i-Android. Nje ukuba sibhalise kwaye sigqibe amanyathelo ambalwa okuqinisekisa, sigcwalisa idatha yeakhawunti yebhanki kwaye singaqala ukuthenga iBitcoins, iBitcoins eziza kugcinwa kwisipaji esinikwa yile nkonzo, esinokuthi senze kuyo intlawulo kwabanye abasebenzisi kule ingqekembe okanye uzigcine ngokulula de ixabiso labo lentengiso liphezulu kuneli likhoyo.
Sukucinga kabini kwaye ufumane i-10 $ SIMAHLA kwi-Bitcoin ngokunqakraza apha
Kwakwisicelo esinye singalifumana ngokukhawuleza ixabiso leBitcoin Ngexesha lokuthenga okanye lokuthengisa, ukuze singabinasidingo sokudibana namanye amaphepha ewebhu ngaphambi kokwenza le nkqubo. Njengomgaqo jikelele, ixabiso leBitcoin liboniswa ngeedola, ke kuyacetyiswa ukuba uthenge le mali ngeedola hayi ngeeyure, kungenjalo sifuna ukulahlekelwa yimali ngotshintsho olwenziwe yibhanki ukwenza intengiselwano.
Uyenza njani eyam iBitcoins
Ukuze uqale ukubeka intloko yakho kwihlabathi leBitcoins kufuneka kuqala uqhagamshelo lwe-intanethi, ikhompyuter enamandla kunye nesoftware ethile. Kwimarike sinokufumana iifolokhwe ezahlukileyo zesicelo somthombo ovulekileyo esisetyenziselwa ukufumana iBitcoins, konke kuxhomekeke ekubeni yeyiphi efanelekileyo iimfuno zakho. Inkqubo yokumba i-Bitcoins ilula, kuba iqela lakho liphethe, kunye namawaka ezinye iikhompyuter, ukuqhubekeka nokuthengiselana okwenziwa kwintengiso kwaye ukubuyisa kuqokelela iBitcoins. Ngokucacileyo amaqela amaninzi asebenzayo i-Bitcoins eninzi onokuyifumana, nangona kungengona yonke into enhle njengoko ibukeka.
Xa kukho ukhuphiswano oluninzi, amathuba okuba iqela lakho liya kusetyenziselwa ukwenza intengiselwano yehle kungoko inqanaba lenzuzo linciphile. Akukho mntu unokulawula inkqubo yokunyusa ingeniso yeBitcoins, ekuphela kwento enokuthi yenziwe kukudala iifama ezinenani elikhulu leekhompyuter ezixhumeke kwinethiwekhi, zona zona kubandakanya indleko ebalulekileyo yokukhanya, kungabalwa iindleko zesixhobo, ekufuneka zibe namandla kakhulu.
Isantya esenziwe ngaso sincitshisiwe njengoko iBitcoins ikhutshwa, de kufikelelwe kwinani lama-21 ezigidi, ngelo xesha akusayi kubakho mali ze-elektroniki zolu hlobo zinokuveliswa. Kodwa ukufikelela kuloo mali kusekho ixesha elide lokuhamba.
Olunye ukhetho kwimigodi ye-bitcoins ngendlela elula ngakumbi kukuqesha inkqubo ye Imigodi yefu yeBitcoins.
Ngubani olawula iBitcoins?
Ingxaki eboniswa yiBitcoins yamazwe kunye neebhanki ezinkulu kukuba akukho ziko liphetheyo lokulawula yonke into enxulumene nale mali, into ngokucacileyo engabenzi bahlekise, ngakumbi ixesha kule ndawo apho iBitcoin iqala ukuba imali efanayo, nangona isekhona iminyaka emininzi phambi kokuba ibe yeyenye yokwenyani.
ICoinbase, iBlockchain.info kunye neBitStamp banoxanduva lokubonelela ngezixhobo zeBitcoin, ziindawo ezisebenzela inzuzo, ke zihlala zihamba ngenjongo yazo, nabani na obanika eyona mali ininzi, kodwa ayingabo abababeka ejikelezweni, loo msebenzi uwela emgodini, abantu ababulela isoftware ethile kwaye Amandla ekhompyuter yakho anokusebenza kwimigodi kunye nasekufumaneni iBitcoins.
Khu selekoKuba abasebenzisi banolawulo olupheleleyo lwazo zonke iintengiselwano, akukho mntu unokuhlawula iakhawunti njengamakhadi etyala okanye ukujonga iiakhawunti.
Ebekekileyo. Lonke ulwazi olunxulumene neBitcoins lufumaneka esidlangalaleni ngeebhloko, ibhalisi apho lonke ulwazi olunxulumene nale mali lukhona, irejista engenakulungiswa okanye ilawulwe.
IiKhomishini azikho. Iibhanki zihlala kwikomishini ezihlawulisayo ukongeza ekudlaleni ngemali yethu. Iintlawulo esizenzayo ngeBitcoins, kwiimeko ezininzi zikhululekile ngokupheleleyo kuba akukho mntu unokuyenza, nangona ngamanye amaxesha, kuxhomekeke kuhlobo lwenkonzo esifuna ukuyihlawula, enye ikhomishini inokusetyenziswa, kodwa kwiimeko ezithile.
Khawuleza. Enkosi kwiiBitcoins singathumela kwaye sifumane imali ngokukhawuleza nangoko okanye naphina emhlabeni.
Ngokucacileyo, ayisiyihlabathi kuphela, ngaphandle kwemibutho yezemali, exhasa ukwandiswa kwale mali, ikakhulu kuba ayinandlela yakukufikelela kwaye iyilawule.
Uzinzo. Ukusukela ekuzalweni kwayo, i-Bitcoins ifikelele kumanani agqitha kwiwaka leedola kwiyunithi nganye, kwaye kwiintsuku kamva baba nexabiso lamakhulu ambalwa eedola. Konke kuxhomekeke ekusebenzeni kunye nomthamo weBitcoins ezihamba ngalo mzuzu.
Ukudumisa. Ngokuqinisekileyo ukuba ubuza umntu owaziwayo nge-bitcoins kwaye ongekho kangako kubuchwephesha, baya kukuxelela ukuba uthetha ngesiselo samandla okanye into efanayo. Nangona uninzi lwamashishini kunye neenkampani ezinkulu ziqala ukuxhasa le mali, isekhona indlela ende yokuhamba ngaphambi kokuba ibe yimali yemihla ngemihla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Te knoloji » I-Bitcoin, yintoni, isebenza njani kwaye ungathenga phi iBitcoins
I-Cryptocurrensets isekwe kwinkqubo yoontanga (ukusuka kumsebenzisi ukuya kumsebenzisi) eyenze ukuba ikwazi ukwahlukana neengxaki zeendlela zangaphambili zentlawulo: isidingo somntu wesithathu.
Phambi kokuba kwenziwe i-cryptocurrensets, xa wawufuna ukwenza intlawulo kwi-Intanethi, kwafuneka ubhenele kumaqonga anjengeeBhanki, iPaypal, iNeteller, njl njl ukwenza intlawulo.
Nge-cryptocurrency ye-Bitcoin oku kutshintshile kuba akukho mfuneko yokuba kubekho umzimba osemva kwale mali yasimahla, iyinethiwekhi ngokwayo eveliswe ngabasebenzisi (amawaka eekhompyuter kwihlabathi liphela) abaqinisekisa ukwenza uhlolo, ulawulo kunye nokubhaliswa kwe iintengiselwano.
Satoshi Nakamoto sitsho
Mnu Craig Wright, ayingo Satoshi lo. Le ndoda yayifumene ngengozi enye yeedrive ezinzima endizisebenzisileyo.
Intengiselwano kaFinney, yinto endiyenzileyo ukusuka kwipc yam, iCore 2 Duo ene-2gb yenkunzi yegusha kunye ne-80 hard disk, njengoko ndilahle iphepha eli-9 lePdf yeBitcoin, kunye nothelekiso lomthetho kaMorey, kwilaptop .
Utshintshiselwano lwenziwe kwi-PC yam ukuya kwiLaptop ye-Acer Aspire, kwaye i-2,5 hard drive yelaptop yathunyelwa kuyo, ngenxa yempazamo. Ubudlelwane bam nale ndoda bebungekho ngaphezulu kwentengiso, andimazi, kwaye andazi ukuba uzimisele ntoni, okanye injongo yalo mbandela uphela.
Intengiselwano kaFinney yayiluvavanyo lokuqala endilwenzileyo, nge-ip kunye ne-port 8333 ephumeleleyo. Mna noFinney sifihla ukuhanjiswa kwefayile kunye nentengiselwano ukulungiselela intlanganiso.
Le yenye yeenyaniso neemfihlakalo endizityhile kuwe namhlanje.
Namhlanje, ndiza kuhlala ndingaziwa, kodwa ngeli xesha ngokungafaniyo kwiminyaka yakutshanje, ndikulungele ngakumbi ukuthetha.
UJaime Noble sitsho
OKUBALULEKILEYO: eSpain, sebenzisa i-LiviaCoins.com ukuthenga okanye ukuthengisa ii-bitcoins. Ngokukhawuleza kwaye kulula
Phendula kuJaime Noble